ဖူးနုသစ်: ရွှေမင်းသမီးသို့ အိပ်မက်ခြင်း
Posted by ZT at 3:48 AM
ဖြစ်ရလေ။ အဲဒီလူကလဲ မမေးမစမ်းဘူးလားနော်။
တို့သာဆိုရင် ဇာတ်လမ်းကလေး ဆက်လိုက်ဦးမယ်။ ခြောက်လ တိတိ ဖုံးပြောခဲ့တဲ့သံယောဇဥင်္ဆိုတာ မနညး်ပါဘူး.တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားပြောလို့ရတယ်ဆိုတာ ခံစားချက်ခြင်းတူမှ ပြောလို့ရတာပါ။ ခံစားချက်ခြင်းမတူရင် ပြောလို့မရပါဘူး.ခဏဘဲပြောတယ်ဆိုရင်ောတ့ မသိသာပေမဲ့ လူတစ်ယောက် ကို နာရီဝက် စကားပြောဘိုိ့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။
အဲဒီတော့ သူမကလေးက ပပဝငး်ခင် မဟုတ်ပါဘူးဆိုလဲ ကိစ မရှိပါဘူး. ကိုယ် က ပပဝင်းခင် နဲ့ ခင်နေတာ မဟုတ် အခု ညီမ နဲ့ဘဲ ခင်နေတာ ဆိုောတ့ညီမ ကိုဘဲ သံ့ယောဖဉ် ဖြစ်နေပါပြီ. ဆိုပြိး အပြန်မှာ တွေ့ခွင့်တောင်..ရေမွေးတို့ ပိုက်ပိုက်အိတ် တို့အနွေးထည် တို့ ဘာတို့ ညာတို့လက်ဆောင်သွားပေး..ရုပ်ကလေးက သင့်တယ် ဆိုရင် ကဲ.. အဲဒါဆိုရင်...
ဒါနဲဘဲ တို့မှာ ရည်းစားများသွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကွယ်။
၆ လတောင်ဖုန်းပြောပြီးမှ ကောင်မလေးက သစ်စိမ်းချိုးချိုးတယ်ပေါ့...။
ပထမတုံးကတော့ သူပါအလိုတူအလိုပါ ပြောနေပြီးမှ.....။
မမကေအိုအမ် မန့်တာဖတ်ရင်း.. ဟုတ်သားပဲလို့ထောက်ခံလာတာ...
မမကေအိုအမ်ပြောတာ ဟုတ်တယ်။ အဲလိုပြောလိုက်ပြီးရော...
သူကိုက မော်ဒယ်မလေးနဲ့ရည်းစားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ လောဘကြီးနေတာ...
နံမည်ကိုကြိုက်တာလား လူကိုကြိုက်တာလား။ မမကတော့ သူ့ပညာတွေ ထုတ်ပြနေပါပြီ...
ဟုတ်တော့ဟုတ်သား။ Caller ID မရှိသေးတော့ ကောင်မလေးက ဘယ်လိုမှ ယုံချင်စရာမှ မရှိတာ။ ဆက်တဲ့သူကသာ ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်း ဆက်ရတော့ အဲဒါ မတွေးမိဘူးနေမယ်။
နွေးနေခြည် ပြောတဲ့အတိုင်း တသွေမတိမ်း ပြောသွားသည်။
တစ်ကယ်လို့ ပပဝင်းခင် အစစ် ဖြစ်နေပြီးတော့ သူ့ဆီက ဖုန်းဆက်တာကို လက်ခံ မပြောချင်တော့လို့ ဒီလို လုပ်ကြံလီဆယ်လိုက်ရတာပါဆိုရင်...။ အဲလို ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုပြောကြမလဲ...။ အခုပြန်မဆက်ကြည့်မိဘူူးလား...။ အစမ်းပေါ့ဗျာ။ ခုက ကောလား အိုင်ဒီတွေ ပေါ်နေတော့ ...။
Ko Boyz ကလည်း ပင့်တတ်လိုက်တာနော် အချွန်နဲ့။ ၆ လစာက နေ လေဆာ ဖြစ်ခိုင်းတာ ကျနေတာပဲ။